१ जनाको संक्रमण भेटाउन रु १ लाख खर्च - Everest Dainik - News from Nepal
१ जनाको संक्रमण भेटाउन रु १ लाख खर्च
काठमाडौंः नेपालमा १ जना संक्रमित पत्ता लगाउन रु १ लाख ४ हजार ६ सय ३० खर्च भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० हजार ४ सय ८३ संक्रमित पत्ता लगाइएको र रु ५ हजार ५ सय प्रतिपीसीआर परीक्षण खर्च भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म ५ लाख ७९ हजार ८ सय ९९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिसकेको छ । रु ३ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार ५ सय पीसीआर परीक्षण खर्च भएको छ । ‘एउटा संक्रमण भेटाउनका लागि सरकारले अहिले १ जनामा १ लाख ४ हजार ६ सय ३० रुपियाँ खर्च भएको छ ।
उपचारमा खर्च १ व्यक्तिको ३० दिन राख्दा ४लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ, ’, उनले भने , ‘यसरी कोरोनाको जाँच गर्ने र पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने पद्धति धेरै नै खर्चिलो भएको छ । जरुरी काम नपरीकन बाहिर ननिस्कनु होला ।’
उनले बाहिर निस्कनै पर्‍यो भने २ मिटरको दूरी कायम गरी मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न तथा घर गइसकेपछि साबुनपानीले मिचिमिची हात धुन अनुरोध गर्नुभएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणमा ५ लाख ४९ हजार ४ सय १६ जनामा संक्रमण देखिएको छैन ।
यस्तै १८ हजार २ सय १४ जना निको भई घर फर्किसकेका छन् भने १ सय ३७ जनाको संक्रमणको कारणले मृत्यु भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार आइसियुमा १ सय ३३ र भेन्टिलेटरमा १५ जना छन् । यस्तै ५ सयभन्दा बढी संक्रमित रहेका ६ जिल्ला मोरङ, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही र काठमाडौँ छन् । संक्रमित शून्य रहेका जिल्लामा भोजपुर, मुस्ताङ, म्याग्दी र हुम्ला छन् ।
उहाँले संक्रमण रहेका टोलटोलमा अहिले पनि खुला हिँड्ने र नाचगान गरिएको पाइएकाले त्यसो नगर्न अनुरोध गरे । उहाँले धेरै जनामा संक्रमण फैलियो भने उपचारका लाािग समस्या झनै थपिने बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, क्लब र टोललाई व्यक्तिगत भेटघाट र सामूहिक भेट गर्दा निगरानी गर्न र स्वास्थ्य सचेतना अभियान सञ्चालन, अनुगमन गर्न तथा स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार पालना नगरे सम्बन्धित निकायलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
ट्याग्स: १ जनाको संक्रमण भेटाउन, काठमाडौं, डा. जागेश्वर गौतम, रु १ लाख खर्च